Zikhala ngokugwazisa izaguga | News24
Zikhala ngokugwazisa izaguga
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Ihholo i-AF Wood Centre lapho izaguga zikhala ngokugwaziswa imali engango-R20 ukuze zizoba sekuqaleni komugqa wokuhola.
ZIKHALA ngokugwaziswa imali engango-R20 izaguga ezihola imali yempesheni ehholo elisedolobheni i-AF Wood elikuBoom ezansi nedolobha.
Ezinye zalezi zaguga ebezidinwe zigane unwabu mayelana nokugwaziswa zikubeka kucace ukuthi abantu abagila lo mkhuba onogada abangaphansi kwenkampani i-Fidelity Security Group ezithi abaye bangenise ngaphakathi labo abasuke begwazile ngemali engango R20. Lokhu sekwenze nalaba abavuka ngovivi ukuthi bangaboni kwenza umehluko ukuvuka kwabo ngoba yize besuke bevukile kodwababa sekugcineni komugqa ngoba bengazange bakhiphe imali yokugwaza.
Okuphinde kwavela ukuthi akubona bodwa onogada abagwazisayo kodwa kuthiwa kuneqembu labesifazane elisiza ukubheka isimo ngaphakathi nalo eselenza ibhizinisi lokugwazisa abantu abathile ukuze bangene ngaphakathi, basheshe bahole futhi babe sekuqaleni.
Omunye wezaguga ocele ukuba igama lakhe lingadalulwa ongowokuhlala endaweni yase-Elansdkop uthe yena uye aphoqeleke ukuthi aze abuye kuze kube kathathu ukuzohola imali yesondlo sabantwana abayizintandane ( foster children) yabazukulu bakhe abathathu. Uthe ngokujwayelekile ukuhola kuye kube izinsuku ezintathu ngenxa yokuthi umugqa usuke umude kakhulu
“Kuqala besiye sivuke ngovivi futhi lokho bekusisebenzela ngaphambi kokuthi kuze kuqhamuke indlela entsha yokugwazisa. Ngehora lesithathu izintathakusa bengibe sengilana. Bengiba sekuqaleni kwawo umugqa futhi kungekho ukuthi sikhokha imali.
“Kuhambe kwahamaba baqala onogada bavula ibhizinisi lokukhokhisa imali ukuze abantu babe abokuqala emgqeni. Emva kokuba sekuvele ukukhokhiswa ukuvuka ngovivi akubange kusaba nomthelela omuhle.
“Sibuya kuze kube ikathathu manje ngoba thina asinayo imali yokugwaza.”
Esinye isaguga sona esiliqhamukisa e-Edendale sithe naso asihambisani nokuhlukunyenzwa kwabo ngokugwaziswa.
“Uma ungenayo imali noma ungafuni ukugwaza ukhishwa inyumbazane. Lokhu abakwenzayo kungukusihlukumeza. Abanye bethu badala futhi akumele ngabe baphathwa ngale ndlela,” kukhala esinye isaguga.
Okhulumela iSouth African Security Agency (Sassa) uMnu Vusi Mahaye uthe bazokwenza uphenyo mayelana nalezi zinsolo.
Okhulumela inkampani i-Fidelity Security Group uMnu Daniel Moxham uthe bayashaqeka ukuzwa ukuthi kunezinsolo ezifana nalezi ezibhekiswe kubqasebenzi babo.
Uthe isenzo esifana naleso kuyobe kuwukuphula umthetho wale nkampani.
“Esizokwenza ukuthi sizoba nophenyo oluzokwenziwa lapho kuzobhekisiswa mayelana nalei zinsolo. Nakanjani uma kutholakala ukuthi kunabasebenzi abathintekayo labo basebenzi bazothathelwa izinyathelo baphinde futhi babhekane nokuqondiswa kwezigwegwe.
“Inkampani yethu ayivumelani nokuphulwa komthetho yingakho nje sizoqinisekisa ukuthi senza uphenyo olunzulu,” kusho uMJoxham.